पूर्व मन्त्री विष्ट राजनीति त्यागेर कृषिमा व्यस्त « Farakkon
पूर्व मन्त्री विष्ट राजनीति त्यागेर कृषिमा व्यस्त
दाङ, चैत २१ । ५५ बर्षीय पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट राजनीतिक जीवन वाट सन्यास लिएर पछिल्लो समय कृषि कर्ममा तल्लिन भएका छन् । केही वर्ष दाङ र बाहिरी जिल्लाहरुमा कालो चामलको खेति गरेर चर्चा कमाएका पूर्व मन्त्री विष्टले पछिल्लो समय दाङको विजौरीमा फेरि सिउँडी प्रजातिको ड्रागन फ्रुटको खेति थालेका छन् ।
५५ बर्षका विष्ट ५५ बर्षकै पत्नि गंगा दिनरात परिश्रम गरिरहेका छन् । पूर्व मन्त्रीको बुढा बुढीको सादकी जीवन सैली देख्दा स्थानीय बासी र किसानहरु पनि आश्चर्यमा पर्न गरेका छन् ।
६६ कठ्ठा जग्गा भाडामा खेति
चार जना मिलेर ६६ कठ्ठा जग्गा १५ बर्षको लागि भाडामा लिएर यो खेति सुरु गरेका हुन । भाडा दरपनि फरक-फरक निर्धारण गरिएको छ । पहिलो दुई वर्षको प्रति कठ्ठा १-१ हजार,तेस्रो वर्षमा प्रति कठ्ठा ३-३ हजार, पाँच वर्षमा प्रति कठ्ठा ४-४ हजार र अन्तिम ५ बर्षको प्रति कठ्ठा ६-६ हजारका दरले जग्गा भाडामा लिएर खेति थालेको विष्टले जानकारी दिए । अन्तिम बर्षहरुमा उनीहरुले यो जग्गाको लागि मात्रै ३ लाख ९५ हजार सालिन्दा तिर्नुपर्ने हुन्छ । भाडामा लिएको जग्गालाई चारै तर्फ तारवार गरिएको छ । सिंचाईको लागि बीचमा दुईवटा कुँवा खनिएको छ । संभव भएसम्म यसै वर्ष डिप बोरिङ खन्ने योजना विष्टले सुनाए । ड्रागन फ्रुट रोपिएको जग्गामा सिमेन्टेड पिलरहरु लहरै गाडिएको छ । प्रत्येक पिरलको बीचको दुरी लम्वाई २ मिटर र चौडाई साढे २ मिटर रहेको छ ।
ड्रागन फ्रुटको खेति किन ?
रातमा मात्रै फूल्ने भएको हुँदा यस्लाई ‘क्विन अफ नाइट’ अर्थात रातकी रानी भन्ने गरिन्छ । ड्रागन फ्रुट अर्थात नाइट क्विनको ओरजिन अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिको हो । यो भियतनाम, मलेसिया, थाइल्याण्ड हुँदै भारत, चिन र केही वर्षदेखि नेपालमा भित्रिएको थियो । काभ्रे जिल्ला, भैरहवा, कपिलबस्तु, लमजुङ, पोखरामा पनि यसको खेति हुने गरेको छ । नेपालमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खेति हुन थालेको एक दशक बढी भएतापनि यसको व्यवसायिक खेति भने केही बर्ष यतामात्रै सुरु भएको मान्ने गरिन्छ ।
पूर्व मन्त्री विष्टका अनुसार ड्रागन फ्रुट धेरै गुणहरुले सम्पन्न छ । कोल्डस्टोर फ्रि युक्त ड्रागन फ्रुट ग्याष्ट्रिक र कब्जियतका विरामीको लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । विष्टका अनुसार यसमा विभिन्न रोगहरुका विरुद्ध लड्न सक्ने प्रतिरोधी शक्ति (इम्यूनिटी पावर) अत्यधिक पाइन्छ । ड्रागन फ्रुटलाई काँचै पनि खान सकिने र यसवाट विभिन्न प्रकारका पिय पदार्थ जस्तै जुस,केक,हुस्की ब्राण्डी पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आफुले अध्यन गरेको विष्टले बताए । यो भन्दा अगाडि कालो चामलको खेति गरेर चर्चा बटुलेका पूर्व मन्त्री विष्टले नयाँ÷नयाँ खेति र प्रविधिमा आफ्नो रुचि भएको हुँदा पछिल्लो समय दाङमा ड्रागन फ्रुटको खेति थालेको जानकारी दिए । ‘मैले यसवारेमा थाहाँ पाएको झन्डै १४÷१५ बर्षजति भयो । लामो अध्यन र परामर्ष पछि साथीहरु संग मिलेर नाइट क्विनको खेति थाले,’ विष्टले भने ।
फल्न लाग्ने समय
ड्रागन फ्रुटको ठूलो विरुवाले रोपेको झन्डै दुई वर्षपछि, मझौलाले तीन वर्ष र सानो खालेको बोटवाट चार बर्षपछि फल दिन सुरु गर्छ भन्ने आशा विष्टले व्यक्त गरे । विष्टका अनुसार ड्रागन फ्रुट जेठको आधा आधीवाट कात्र्तिक महिनाको आधा महिनामा मात्रै फल्ने गर्छ । यो बीचमा १० देखि १२ पटक सम्म फल्ने गर्छ । यसले एक पटक रोपेपछि २० देखि ३० बर्षसम्म यो फल दिन्छ । एउटा बोटमा सरदर २५ देखि ५० केजी सम्म फल्छ भन्ने जानकारी आफुले पाएको विष्टले बताए । बेलुका ८ बजेतिर फूल्ने र विहान ८ बज्दा नबज्दै ओइलाइ सक्ने हुँदा यसलाई नाइट क्विन अर्थात रातकी रानी भन्ने गरिएको पूर्व मन्त्री विष्टले जानकारी दिए । फूलेको ३० देखि ३५ दिनमा ड्रागन फ्रुट खान लायक हुने गर्छ ।
विष्टले ४ बर्ष पहिला नै ड्रागन फ्रुटको विरुवा ट्रायलका रुपमा ४० जपित बोट दाङको विजौरी निवासी विरबहादुर बुढालाई रोप्न लगाएका थिए । त्यो राम्रो भएपछि त्यसैवाट कलमी गरेर केही विरुवा तयार पारेका थिए । तर अधिकाँस विरुवा भने विदेश वाट ल्याएको र अझैं थप तीन हजार विरुवा आउने क्रममा रहेको जानकारी दिए । आफुहरुले काठमान्डौंका मानिसहरु बाट विरुवा खरिद गरेको बताएका विष्टले उनीहरुले भियतानम,मलेसियावाट ती विरुवा खरिद गरेर ल्याउने गरेको जानकारी दिए ।
ड्रागन फ्रुटका प्रकारहरु
ड्रागन फ्रुट तीन प्रकारको हुने गर्छ । फल बाहिर रातो र भित्र सेतो, बाहिर रातो भित्रपनि रातो र अर्को बाहिर पँहेलो र भित्र सेतो खाले हुन्छ । खैरो रङको फल दिने अर्कोपनि हुने गरेको आफुले सुनेपनि हालसम्म नदेखेको विष्टले बताए । सबैभन्दा राम्रो भने बाहिर र भित्र दुबै रातो भएको मान्निछ । विरुवाको बोट,आकार प्रकार तथा कलमी गरेको आधारमा ५० सयदेखि प्रति विरुवालाई १ हजार ५ सय रुपैंया सम्म मुल्य पर्ने विष्टले जानकारी दिए ।
विरुवा खरिद प्रक्रिया अझैं जारी रहेको हुँदा कति मुल्य बराबरको विरुवा खरिद भयो भन्ने एकिनका साथ भन्न नसकिने बताएका पूर्व मन्त्री विष्टले तारजाली लगाउँदा, बालुवा सिमेन्ट, रड, जेसिवी, स्रमिक, प्राङगारिक र रासायनिक मल लगाएको खर्च जोड्दा झन्डै ६० लाखसम्म खर्च भइसकेको जानकारी दिए । तर अझैं उनीहरुले तारवार गरेको जग्गामा जम्मा ४५ प्रतिसतमा मात्रै विरुवा रोप्ने काम सकिएको छ । पुरै जग्गामा विरुवा लगाउँदा सम्म झन्डै डेढ करोड जति खर्च लाग्ने सक्ने अनुमान गरिएको पूर्व मन्त्री विष्टले बताए ।
किन सिमेन्टका पिलर ?
काठ कुहिले हुँदा सिमेन्टको पिलर बनाउँदा खर्च बढेको उनको तर्क छ । ‘ड्रागन फ्रुटको बीच बीचबाट जरा पलाउँछ । १५÷२० वर्ष सम्म काठ कुहिएर काम नलाग्ने हुन्छ । त्यसैले सिमेन्टको पिलर बनाउनु परेको हो,’ विष्टले भने।
गाई भैंसी, कुखुरा र रासायनिक मलको प्रयोग
प्रत्येक विरुवाको बोटमा कुखुरा, गाई भैंसी, अण्डाको खोष्टा र डिएसपी गरि चार प्रकारको मल दिएको विष्टले जानकारी दिए । प्रत्येक बोटमा चार माना कुखुराको मल, आधा डोको गाइ भैंसीको, एक मुठ्ठी डिएपी र अण्डाको खोष्टापनि राखिएको विष्टले बताए । हालसम्म २० ट्रिप गाई भैंसीको,कुखुराको ७० बोरा,डिएपी र अण्डाको खोष्टा खरिद गरेर ल्याइएको उनले बताए । ‘दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने पहरामा फूल फूलाउन सकिन्छ र मरुभूमिमा मूल फुटाउन सकिन्छ,’ पूर्व मन्त्री विष्टले भने ‘ म यो बंजर डाँडोमा रातकी रानी फूलाएर दुनियालाई देखाउन चाहान्छु।’ सिंचाईको लागि कुँवा खनेको भएपनि थोपा सिंचाइको व्यवस्था गर्न काठमान्डौंवाट प्राविधिक झिकाएको विष्टले बताए । भल्व खोल्ने वित्तिकै सबै बोटमा एकै पटक पानी पुग्ने प्रद्धतिलाई थोपा सिंचाई भन्ने गरिन्छ । हाल उनीहरु कुवावाट पानी तानेर जग मार्फत प्रत्येक बोटमा सिंचाई गर्दै आएका छन् । ड्रागन फ्रुटलाई पानी चाहिने भएपनि यसको बोटमा पानी तालिनु राम्रो मानिदैन । त्यहाँ रोपेका अधिकाँस विरुवाले मुना फालि सकेको छ ।‘विरुवाले मुना फालेको देख्दा हामी निकै खुसी भएका छौं’ विष्टले भने ‘ बगाएको बसिना र लगाएको लगानी अब डुब्दैन । यसले हामीलाई राम्रै फाईदा दिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।’
आजीवन राजनीति गर्नेहरु नै सबैभन्दा भ्रष्टचारी
हालसालै तुलसीपुर १९ थानगाउँमा दुई कोठे घर निर्माण गरे पछि विष्टले आफुलाई दाङकै नयाँ बासिन्दाको रुपमा अथ्र्याए । विष्टको एक मात्र सञ्तान छोरी सामाना विष्टको गत वर्ष नै विहे भइसकेको छ । त्यसैले घरमा पूर्वमन्त्री विष्टका पतिपत्नि मात्रै बस्छन् । ‘अरुलाई काम गराएर आफु बसी बसी खाने सबैभन्दा दुःखी मान्छे हो,’ पूर्व मन्त्री विष्टले थपे ‘जो मान्छे आफ्नो पौरखले पसिना बगाएर काम गरेर खान्छ त्यो संसारकै खुसी हुन्छ।’ काम नगर्नेहरु कतिपयले निदाउनका लागि सिलिपिङ ट्यावलेट खाने गरेको भएपनि काम गर्ने आफु जस्तालाई चैनको निन्द्रा लाग्ने अनुभुव उनले बाँडे । ‘एस आरम र सुख सयलको जीवन व्यथित गर्नेहरु प्राय रोगी हुन्छन,’ विष्टले भने ‘ खेत वारीमा काम गर्नेलाई न क्लव जानुपर्छ न त योगा नै जानुपर्छ।’ हालसम्म आफुलाई कुनैपनि रोगव्याधी नभएको दाबी गरेका उनले काम गरेर साँझ घर फर्किदा मनमा सुन्तुष्टि प्राप्त हुने तर्क गरे ।
आफ्नो एक मात्रै सञ्तान छोरी भएको बताउँदै उनले लिंगिए विभेद नगर्ने हुँदा छोरा छोरीमा कुनै विभेद नराख्ने धारणा राखे। अहिले पनि ओदा अर्थात केपी पिके प्रचण्ड र दाहालको पछि लागेमा झन्डावाला गाडि पाउन आफुलाई समय नलाग्ने दाबी गरेका उनले आफुमा त्यसको कुनै लालसा नरहेको बताए । ‘अहिले आएर मलाई राजनीति त्यति मिठो लागेन,किन भने राजनीति महंगा भयो, राजनीति जटिल भयो र राजनीति फोहरी भयो,’ विष्टले भने । दश बर्ष सम्म चलेको सशस्त्र युद्धमा ज्यानको बाजी लगाएर लागेका विष्टले त्यसलाई इतिहासको आवश्यकता भन्दै त्यसप्रति कुनै पछुतो नरहेको तर्क गरे । माओवादी युद्ध राम्रो कामको लागि भएपनि शान्ति प्रक्रिया पछि क्रान्तिकारी हौं भन्नेहरुमा विचलन आएको उनको धाराणा थियो । अहिले नेपालमा चलिरहेको राजनीति बुज्र्रुवा संसदीय राजनीति भएको हुँदा यसमा काँग्रेसको शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड केपीमा कुनै भिन्नता नरहेको तर झन्डा मात्रै फरक रहेको उनले दाबी गरे ।
मोहन बैद्य किरणलाई इमान्दार नेताको रुपमा व्याख्या गरेका उनले विप्लवले आन्दोलनको क्रममा गरिने कुरा कत्तिको परिवर्तन हुन्छन् त्यो भविस्यमा मात्रै भन्न सकिने बताए । राजनीतिक जीवन वाटै पुरै सन्यास लिएको बताएका पूर्व मन्त्री विष्टलाई यो बीचमा बैद्य र विप्लव सबै खोज्न आएपनि आफु जान नमानेको जानकारी दिए । ‘राजनीतिक आजीवन गरिने ठेक्का पट्टा, पेशा,व्यवसाय र व्यापार हैन,’ विष्टले भने ‘ राजनीति भनेको स्वच्छिक समाजसेवा हो जो निसर्त र निश्वार्थ हुन्छ।’ राजनीति आजीवन गर्न नहुने बताएका उनले जस्ले आजीवन राजनीति गर्न खोज्छ भ्रष्टचारको मुल जरो त्यही हुने तर्क गरे ।